Muqdisho:Tababarayaal ka socda Burundi oo Imanaya Soomaaliya – idalenews.com
Saraakiisha Mareynkanka ee ku sugan dalka Burundi ayaa waxay Tababar Socday Mudo Labo Todobaad ah u soo xireen Saraakiil ka tirsan ciidamada difaaca Qaranka ee dalka Burundi,kuwaasi oo la doonayo in loo soo diro Soomaaliya si ay qeyb kaga Noqdaan amisomta caawineys Soomaliya.
Xerada Tababarka uu ka socday oo lagu Magacaabo Gakumbu Camp,ayaa waxay qaabishay Saraakiil gaareysa in ka badan 20-sarkaal oo bartay Nuucyada kala duwan ee ciidanka.
Warbaahinta dalka Uganda ka soo baxa ayaa arintaan si aad ah u hadal haya,waxaana ciidamadan Tababarka dhameystay inta uu u socday tababarkooda helayeen casharo ku saabsan qaabka loogu gurmado goobaha ay ka socdaan dagaalada cul culus,iyadoo dhanka kale bartay u daad gureynta goobaha dagaalada qalabka ay u baahan yihiin ciidamada dagaalka ku jira.
“Wuxuu yiri sarkaalka ciidamada Tababarka, waxay na bareen sida loogu daad gureeyo ciidamada halka ay ka socdaan howlgalada,isagoona hadalkiisa intaasi raaciyay in waxii ay faa’ideysteen ay sida ay tahay u gaarsiin doonaan goobaha loogu talagalay u jeedkana uu yahay in la geeyo.
Master Sergeant Derek Gill oo ka mid ah saraakiisha Mareynkanka ee Tababarka siiyay ciidamada Burundi ayaa shaaca ka qaaday in Muhiimada Koowaad ee ciidamadaan loo tababaray ay tahay inay caawiyaan walaalahooda Soomaaliya sida uu isaga sheegay ,wuxuunaa adkeeyay in mar waliba ay garab taagan yihiin Soomaaliya iyo Burundi.
Ciidamada Burundi waxay qeyb ka yihiin ciidamada wadamada dariska ah ee howlgalka ka wada Soomaaliya kuwaasi oo ka soo horjeeda ama dagaalo kula jira Al-shabaab oo ah Urur la xariira Al-Qaa’ida oo gacanta ku hayan gobolada dalka Soomaaliya qaarkood.
Waxaana ciidamadaan Tababarka u soo dhamaaday la filayaa inay soo gaareen Soomaaliya,iuyagoo qalabkooda u dhameystiran yahay,waxaana caawin doona Qaramada Midoobay iyo Mareynkanka.
Nairobi: QM oo Ka hadashey Maamul u sameynta Gobalada Dalka